China Umatshini wokuqokelela igazi lwenaliti abavelisi kunye nabathengisi | IVEN
Ukuqokelelwa kwegazi kwenaliti yokuhlangana
Uhlobo lweenaliti zokuqokelela igazi ngenaliti.
Ukulayishwa kwenaliti → Ukulayishwa kwenaliti → Ukuncamathelisa → Ukuqwayita → Ukufunyanwa kwe-pinhole clogging → Ukufunyanwa kwenaliti yenaliti → Isiliconization → Ukususwa kwenkunkuma → Inaliti yokukhusela inaliti ende ukukhusela isiciko Ukulayisha → Ukucofa ikhava → Imveliso egqityiweyo.
Inkcazo yesikhululo sokusebenza
Phatha isiphatho senaliti ngesidlidliza, emva koko faka indlela yesilayidi kwaye uyibeke kwisiqwengana sesixhobo.
Ukulayisha inaliti kwindlela yenaliti, inaliti iphakanyisiwe yaya kwisihlalo senaliti ngokukrola ukungunda kwesihlalo senaliti kwaye emva koko iphoswe esihlalweni senaliti, emva kokulayisha inaliti, jika icala kwaye ungene kwisikhululo sokuncamathelisa.
Apha sixhobise ngokufumanisa inaliti
Ukuncamathelisa kuqhutywa yimoto yaseJapan yePanasonic servo, kwaye izikhokelo ezibini ezinemigca eyongeziweyo ukuqhuba itreyi yeglue ukuhambisa iglu. Ibhokisi yetreyi yeglu isebenzisa i-Lenuz yaseJamani ukufumanisa ngokuzenzekelayo ukuba ibhokisi yetreyi yeglu ineglu okanye akunjalo, kwaye ukuba akukho matshini weglue uyayeka ngokuzenzekelayo, kwaye ialam iyaboniswa kwiscreen sokuchukumisa.
Itonela lokomisa kukomisa iglu, ibhokisi yokumisa ifudunyezwa yityhubhu yeglasi yentsimbi yokufudumeza intsimbi engenacingo, ngegeji yokubonisa yangoku, umlawuli weqondo lobushushu ulawula ubushushu ukufikelela kwinqanaba. Ngenisa ukubonwa komfanekiso emva kokuma.
Ukuchongwa kwe-pinhole clogging
Ukujonga ukuba inaliti ivaliwe na okanye hayi. Yindlela yokubetha komoya. Kuyagwetywa ukuba inaliti ivaliwe ngumoya na okanye hayi. Inzwa ibhaqa umntu-ukuya-kuye kwaye ixhotyiswe nge-barometer. Xa uxinzelelo lomoya lungekho mgangathweni, luya kuncipha ngokuzenzekelayo kwaye lususe inaliti exhunyiwe kumgca ophambili. Jika indlela kwisikhululo esilandelayo.
Apha isikhululo sinokuxhobisa nge-CCD yokufumanisa inaliti. Xa iimveliso ezingafanelekanga zifunyenwe, ziya kususwa kwindawo yokucheba, emva koko kungene ukufunyanwa kokuvuza. (Ukunyamezelana kokuphakama kwenaliti kungaphakathi kwe-0.3, kwaye i-burr ye-0.05 * 0.05 inokufunyanwa)
I-helix ephindwe kabini ngeoyile yesilicone, ejikeleza iidigri ezingama-180, kukho isixhobo esivuthuzayo ngaphakathi kwityhubhu yenaliti xa uthambisa ioyile, ioyile yesilic ioyile ukusuka ezantsi ukuya phezulu, nge barometer, inokucoca ngokuzenzekelayo kwaye impompe xa uxinzelelo lungekho kumgangatho. I-oyile yegesi iyampontshwa ngumoya ukuphepha umthombo wamandla kunye nokubangela umlilo. Emva kokugqiba i-siliconization, iya kwisikhululo senkunkuma esilandelayo.
Ukulahla isikhululo senkunkuma kukususwa kwemveliso yenkunkuma ebanzi yi-CCD imaging kunye nokufumanisa ukuvuza.
Inaliti ende ekhusela isiciko
Yamkela indlela yesilayidi yokulayisha ikhuselo lokukhusela inaliti, izinto ezingenazintsimbi ziyi-304, isixhobo sokuchonga i-Autonics, nokuba kukho isikhwama kwaye sidlulisele kwindlela yesilayidi yokuxhokonxa, umqolo ongaphambili wesheke unezilinda enye ukuya kwenye, ombane kagesi Ivaluva ilawulwa ngokukodwa. Emva kokuba isikhwama sivavanyiwe, nokuba inaliti ilahlekile, ingxowa ayisuswanga ukuba inaliti ilahlekile, ukuze kuqinisekiswe inkunkuma yeqweqwe kunye nenqanaba elifanelekileyo lokulayisha.
Ngaphantsi kwekhuselo elikhuselayo, kukho indawo yokubeka isikhuselo sokukhusela ukuqinisekisa ukuba inaliti ingena kwikhava. Emva kokucinezelwa, iya kuthunyelwa kwimveliso egqityiweyo engenanto
Inaliti ejikelezayo iboshwe ngokufanayo kwaye iguqulelwe ngobuqhetseba, emva koko yajikeleza iidigri ezili-180 emva kwesilicon, yongezwa kulungelelwaniso
Ukuthwala ukhuseleko lokukhusela
Ikhava yerabha yamkela indlela yesilayidi. Isigqubuthelo serabha sidlula ngokukhawuleza kwaye siwela kwisilayidi. Isingxobo siwela kwincam yenaliti ngokusebenzisa iinxalenye ezenziweyo. Umqolo ongaphambili wesheke ulawulwa omnye uye komnye. Ukuba kukho ukunqongophala kweemveliso, i-sheath ayizukufakwa. Qinisekisa inkunkuma esingxotyeni kunye nereyithi yokupasa esingxotyeni eliphezulu.
Ukucofa ikhava ethambileyo
Isimbozo serabha sibamba umkhono werabha ngendlela efanayo kwaye siyicinezele phantsi, sicinezela isiciko serabha phantsi
Inaliti emfutshane ekhusela isiciko
Yamkela indlela yesilayidi nayo, imathiriyeli yintsimbi engu-304, kunye nokuchongwa kwenzwa ye-Autonics. Nokuba kukho ibhatyi kwaye uyitshintshele kwisilayidi sokushukumisa. Umqolo ongaphambili webhatyi unezilinda enye ukuya kwenye. Ivelufa solenoid ilawulwa ngabanye. Emva kokuvavanywa kwekhava, nokuba inaliti ilahlekile, isiciko asisuswanga ukuba inaliti ilahlekile, ukuqinisekisa inkunkuma yeqweqwe kunye nenqanaba lokupasa kokulayisha okwenzekileyo.
Ukucofa inaliti ngokucinezela
Isigqubuthelo sibamba isiciko esifutshane senaliti ngokufanayo kwaye siyicinezele phantsi, sicinezela isiciko phantsi
Emva kokugqitywa kwemveliso egqityiweyo, jika kwisikhululo sokuhlala kwenaliti, kwaye wonke umjikelo ugqityiwe.
IVEN Igazi Lokuqokelelwa Kwenaliti Ukulungiselela Umatshini
Umthamo omkhulu we-12000pcs / ngeyure.
Ukuzenzekelayo okuphezulu kwe-2, inkqubo yokusebenza efanelekileyo kunye nokwenza ngcono ukudityaniswa, abaqhubi abanezakhono ezi-3-4 banokulawula yonke imveliso kwimveliso ngaphandle kokucela ukulayishwa ukuya kwiinaliti ezigqityiweyo.
Isixhobo sonke sokufumanisa inkqubo esisebenzisa yonke into esetyenziselwa uphawu oluphezulu njengeJamani yaseLenuze, i-OMRON, ukulawula ukondla, isikhululo esisebenzayo, ukuqinisekisa inqanaba eliphezulu lokufumana umgangatho.
Inkqubo yokuSebenza ye-4. Uyilo lomntu kwisikhululo ngasinye, ulawulo lwe-PLC + lwe-HMI.
5.Sebenzisa ukukhonza ukulawulwa kwemoto kwiindawo eziphambili ezihamba phambili, ukulawula ukuchaneka nokuhamba kakuhle.
I-6.Ixhotywe ngezixhobo zealam, njengokungaphumeleli, ijam yezinto, uxinzelelo lomoya ophantsi, kunye nokusilela kweoyile yesilicone, iya kuvusa ialam kwaye inike isikhumbuzi kwiHMI.
7.Inxalenye ebalulekileyo kunye nokusetyenziswa kweyunithi yombane uphawu oluphezulu ukuqinisekisa ukuba umgca ulungelelaniso kunye nokusetyenziswa kwexesha elide.
Ulwakhiwo loMgangatho ophakamileyo Dibana nomgangatho we-GMP
9.Yamkela ulwenziwo kunye nokufunyanwa kweCCD.
Inaliti esebenzayo Uhlobo lweepeni
Isantya sokuSebenza 10000-12000pcs / ngeyure
Ukuchaneka kwe-CCD yokufumanisa inaliti glitch 0.05 * 0.05 (isekwe kukuphakama kwencam yokunyamezelana iphakathi ko-0.3)
Amandla 380V / 50HZ, 18KW
Uxinzelelo lomoya Ucoceko loXinzelelo loMoya 0.6-0.8Mpa
Ukusetyenziswa komoya okuxineneyo 70 M3 / h
Indawo yokuSebenza 6080 * 11200 * 1800 mm (L * W * H)
Umboniso obalaseleyo womsebenzisi
Egqithileyo Umatshini wokuHlola wokuKhanya oZenzekelayo we-LVP (ibhotile ye-PP)
Okulandelayo: Intsholongwane Isampuli Tube Ukuhlangana Line
Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina,